ကိုယျဖွဈခငျြတာကို လုပျရမှာက ကိုယျ့တာဝနျပါ - ONE DAILY MEDIA
လူတိုငျးမှာ ဖွဈခငျြတာတှရှေိကွတယျ။ ဒါပမေယျ့
လူတိုငျးကတော့ ကိုယျ့ဖွဈခငျြတာကိုဖွဈလာအောငျ မလုပျကွပါဘူး။ ဘာဖွဈခငျြတယျ၊ ညာဖွဈခငျြတယျလို့ ပွောကွပမေယျ့ ကိုယျလုပျတာနဲ့ ကိုယျဖွဈခငျြတာနဲ့ ကတခွားစီ ဖွဈနတေတျတယျ။ တဈခါက တပညျ့လေး တဈယောကျ လာပွောတယျ။
သူ ဘာဖွဈခငျြတယျပေါ့။ အဲဒါနဲ့ကြှနျတျောကလညျး အဲလိုဖွဈခငျြတယျဆိုရငျဘာဖွဈလို့မလုပျသလဲလို့ မေးတော့၊ ကူညီပေးမယျ့သူမရှိဘူးလို့ သူပွနျဖွတေယျ။
တကယျက ကူညီပေးမယျ့သူ လိုအပျနတေယျဆိုရငျ ကိုယျကရှာရမှာပေါ့။ ကူညီပေးမယျ့သူက သူ့ဟာသူပျေါလာ မှာ မဟုတျဘူးလေ။
ကိုယျဖွဈခငျြတာကို လုပျရမှာက ကိုယျ့တာဝနျပါ။
ကိုယျဘာဖွဈခငျြလဲ၊ ဘာလုပျခငျြလဲ၊ အဲလိုလုပျဖို့ဘာတှေ လိုလဲ၊ ပညာလား၊ ငှလေား၊ မိတျဆှလေား၊ အဆကျအသှယျ လား၊ ဒါမှမဟုတျ တခွားဘာတှလေိုလဲ။ ပညာလိုရငျ သငျယူရမယျ၊ ငှလေိုရငျရှာရမယျ၊ အဆကျအသှယျလိုခငျြ တယျဆိုရငျလညျးရှာရမှာပေါ့။ ကိုယျ့ကိုကူညီပေးမယျ့သူ လိုအပျနတေယျဆိုရငျ ဘယျသူကူညီပေးနိုငျမလဲ ခဉျြးကပျ ရမှာပေါ့။ ဒါတှအေားလုံးကိုယျကရှာရမယျ၊ လုပျရမယျလေ။
ဖွဈခငျြတယျ၊ လုပျခငျြတယျပွောပွီး ဘာမှမလုပျပဲထိုငျနေ မယျဆိုရငျတော့ ဘယျတော့မှ ကိုယျဖွဈခငျြတာဖွဈလာ မှာမဟုတျပါဘူး။ လောကမှာ ကိုယျဘာဖွဈခငျြတယျ၊ လုပျခငျြတယျဆိုတာကို ကောငျးကောငျးကွီးသိပွီး မဆုတျ မနဈကွိုးစားတဲ့သူတိုငျးဟာ တဈနမေ့ဟုတျ တဈနေ့ အောငျမွငျကွတာကွီးပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျဘာဖွဈခငျြလဲသိပွီလား? ဘယျလမျးကို လြှောကျမှာလဲ သိပွီလား? သိပွီဆိုရငျ ကိုယျလြှောကျမယျ့ လမျးကို ဘယျသူကမှ လာပွီးဖောကျပေးမှာမဟုတျဘူး။ ကိုယျတိုငျဖောကျရမယျ။ အဲလိုလုပျဖို့ လိုအပျတဲ့တနျဆာ ပလာတှကေို ရှာဖှဆေုဆောငျးရမယျ။ အဲဒါတှကေို အသုံး ပွုပွီး ပနျးတိုငျဆီအရောကျလှမျးရမယျ။
ရညျမှနျးခကျြတှကေို အခုပဲအကောငျအထညျဖျောလြှောကျ လှမျးပါ။ ထိုငျနလေို့တော့ ဘာမှဖွဈလာမှာမဟုတျပါ။ အောငျမွငျပါစေ။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်ရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ပါ။
“It is self-responsibility to do what you want to do”
လူတိုင်းမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့်
လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်လာအောင် မလုပ်ကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်ချင်တယ်၊ ညာဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တာနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ကတခြားစီ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ တစ်ခါက တပည့်လေး တစ်ယောက် လာပြောတယ်။
သူ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်း အဲလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်သလဲလို့ မေးတော့၊ ကူညီပေးမယ့်သူမရှိဘူးလို့ သူပြန်ဖြေတယ်။
တကယ်က ကူညီပေးမယ့်သူ လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကရှာရမှာပေါ့။ ကူညီပေးမယ့်သူက သူ့ဟာသူပေါ်လာ မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ အဲလိုလုပ်ဖို့ဘာတွေ လိုလဲ၊ ပညာလား၊ ငွေလား၊ မိတ်ဆွေလား၊ အဆက်အသွယ် လား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားဘာတွေလိုလဲ။ ပညာလိုရင် သင်ယူရမယ်၊ ငွေလိုရင်ရှာရမယ်၊ အဆက်အသွယ်လိုချင် တယ်ဆိုရင်လည်းရှာရမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကူညီပေးမယ့်သူ လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကူညီပေးနိုင်မလဲ ချဉ်းကပ် ရမှာပေါ့။ ဒါတွေအားလုံးကိုယ်ကရှာရမယ်၊ လုပ်ရမယ်လေ။
ဖြစ်ချင်တယ်၊ လုပ်ချင်တယ်ပြောပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေ မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာ မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်၊ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီးသိပြီး မဆုတ် မနစ်ကြိုးစားတဲ့သူတိုင်းဟာ တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့ အောင်မြင်ကြတာကြီးပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲသိပြီလား? ဘယ်လမ်းကို လျှောက်မှာလဲ သိပြီလား? သိပြီဆိုရင် ကိုယ်လျှောက်မယ့် လမ်းကို ဘယ်သူကမှ လာပြီးဖောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်ဖောက်ရမယ်။ အဲလိုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့တန်ဆာ ပလာတွေကို ရှာဖွေဆုဆောင်းရမယ်။ အဲဒါတွေကို အသုံး ပြုပြီး ပန်းတိုင်ဆီအရောက်လှမ်းရမယ်။
ရည်မှန်းချက်တွေကို အခုပဲအကောင်အထည်ဖော်လျှောက် လှမ်းပါ။ ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ။ အောင်မြင်ပါစေ။